Mpanamboatra sy mpamatsy vy oxide black 722/750 | Shencai Pigment
Oxygère Ferrosoferric, Formula Simika Fe 3 O 4. Antsoina hoe oksida vy mainty, kristaly mainty misy magnetika, fantatra koa amin'ny anarana hoe oksida vy andriamby. Ny singa dia mety levona amin'ny vahaolana asidra, tsy mety ritra amin'ny rano, Vahaolana Alkali ary solvents organika toy ny etanol sy etera. Ny oksida ferrosoferric voajanahary dia tsy voavaha amin'ny vahaolana asidra ary manondraka oksidana vy (III) amin'ny rivotra amin'ny toetr'andro mando.
1. Oxydre Ferrosoferric dia fitaovana mavitrika mahazatra. Ny oksida ferrosoferric vita vita vita manokana dia ampiasaina ho akora ilaina amin'ny fandraisam-peo sy ny fitaovana fifandraisan-davitra. Magnetite voajanahary no akora ilaina amin'ny fanaovana vy.
Nampiasaina hanaovana primer sy akanjo ambony.
Tena mafy izy io ary azo ampiasaina ho toy ny mahasalama. Efa be mpampiasa eo amin'ny sehatry ny freins automotive, toy ny: pad freins, kiraro frein sns.
Ny oksida ferrosoferric dia ekena amin'ny sehatry ny fitaovana fantsom-pako any Shina, ho an'ny elektroda, ny famokarana tariby dia mbola eo amin'ny dingana voalohany, malalaka be ny vinan'ny tsena.
Ny oksida ferrosoferric dia azo ampiasaina ho toy ny loko sy poles ihany koa. 3. Famonosana vokatra:
"SHENMING" marika vita amin'ny vovoka vita amin'ny vy oxide black 722 dia mankafy ny lazan'ny tsena avo ary amidy tsara manerana ny firenena ny vokatra.
Raha liana amin'ny fividianana vovo-dronono vy oxide mainty 722 avy any Shina ianao, SHIJIAZHUANG SHENCAI PIGMENT FACTORY no safidinao tsara indrindra.
Anaran'ny varotra IRON OXIDE BLACK
Fanondroana loko Pigment mainty 11 (77499)
CAS No./EC No. 1317-61-9 / 215-277-5
Specifications Hevitra ato Anatiny (Fe3O4) % ≥95
Res. Amin'ny harato 325 % ≤0.5
Masira mety levona amin'ny rano % ≤0.5
sanda pH 5 ~ 8
Gravity manokana g / sm3 4.6
Previous: mavo oksida vy 311/313/920
Manaraka: Green oxide iron 5605/835
mavo oksida vy 311/313/920